मिसन मर्दी हिमाल – Kendra Khabar
in पर्यटन, विचार/ब्लग, शीर्ष खबर
२०७६, ४ कार्तिक सोमबार १२:४३
‘सहरको कोलाहल छोडेर प्यारो लाग्ने डाँडाकाँडा उकाली ओराली, खोला, नदीनाला, रूख बुटबुट्यानको साथ साथ पैदल यात्रा । हाम्रो पुर्ब तयारी र योजना अनुसार पर्यटकिय गाउँ धम्पुस र धम्पुस बाट पोथाना हुँदै प्रितम देउराली, फरेस्ट क्याम्प , अनि रेस्ट्क्याम्प जाने योजना अनुसारनै पोथाना लागियो । पोथाना पुग्दा बिहानको साढे ११ भै सकेको थियो । प्रकृतिलाई नियाल्दै पदयात्रीहरुको लामलस्कर संगै बहदै हामी प्रितम देउराली पुगियो । बाटोमा देर्खिएको प्रकृति कति निश्चल, शान्त, सोभ्य, पबित्र, स्वतन्त्र, परिपक्क । त्यहि प्रकृति हाम्रो साथी बन्दै थियो ।’
२० बर्ष बितेछन देस छोडेर बिदेसी भुमिमा रमाएको । सानो छँदा डाँडा पाखातिर डुल्ने खेल्ने भएकाले होला भिरपाखा अनि बन जङ्गल खोलानाला हिमाल पहाड कहिल्यै भुल्न सकिएन ।
झण्डै २० बर्ष बेलायत बसाइमा धेरै पटक नेपाल आएपनि हिमालतिर ट्रेकिङ गर्ने मौका कमै मात्र भयो । गत बर्ष २०७५ को फागुनमा नेपाल आएको बेला नेपालका केही ठाउँ ताप्लेजुङको पाथीभरा, मुगु जिल्लामा रहेको रारा ताल , सम्म पुग्दा हामीलाई धेरै कुराको अनुभव र अनुभूति भएको थियो । त्यही हुटहुटीले गर्दा होला धेरैको रोजाइमा पर्ने मर्दी हिमाल ट्रेकिङ गर्ने रहर लागिरहेको थियो । तर एक्लै जान गाह्रो होला भनेर साथीको खोजिमा थिएँ । धेरै नजिक र चिनेका साथीहरूलाई मर्दी हिमाल ट्रेकिङका लागि सोधें । प्रस्ताव गर्दा केहि साथीहरु आफ्नैं ब्यस्थताको कारणले र केहि साथीहरु हिड्न नसक्ने जस्ता अरु थुप्रै कारणले गर्दा जान नसक्ने बताए । यस्तोमा एक्लै जाने वा नजाने दोधारमा थिएँ । त्यसै बेला मोबाइलको घण्टी टिरिङ टिरिङ बज्दै थियो नयाँ नम्बरबाट । नम्बर नयाँ भएकाले फोन उठाउ कि नउठाउ भै रहेको थियो । उठाएं । मेरा अति निकट बेलायत तिरै बस्ने साथी बेदराज पराजुलीको फोन रहेछ ।
दशैं मान्न नेपाल आउनुभएको । कुराकानी वहाँले सोधी हाल्नु भयो–लौन ट्रेकिङ जानु पर्यो, कता जाने होला ? ‘के खोज्छस् …. । भनेजस्तो पो भयो । संयोग भनौं वा भाग्य । मैले वहाँलाई अहिले ट्रेकिङको हटकेक मानिने र धेरैको रोजाइमा पर्ने मर्दी हिमालको बारेमा बताए । उहाँले उत्सुकता देखाउँदै भन्नुभयो–‘ग्रेट ।’ कुरा मिल्यो । उहाँ काठमाण्डौबाट पोखरा आइपुग्नुभयो । यात्राको लागि चाहिने ट्रेकिङ इकुप्मेन्ट ट्रेकिङ ट्राउजर, ज्याकेट ब्याग, गग्स, स्टिक, साथै अन्य आवश्यक सामग्रीहरु जोहो मिलाइयो ।
धम्पुस हँुदै जानुपर्ने । हरिचोकबाट धम्पुसका लागि बस लाग्दो रहेछ । तर कुर्न हामीलाई ढिला भयो । छिटो जाने विकल्प थियो चिनेकै तिवारी दाइको ट्याक्सी । धम्पुस जाँदै गर्दा घट्टे कुलामा बाबुराम भण्डारीको दोकानमा चिया चना खायौं । गफको तालमा उकालो धम्पुस आएको पत्तै भएन । बिहानको साढे ९ बजे हामी धम्पुसबाट पैदलयात्रा शुरु ग¥यौं ।
सहरको कोलाहल छोडेर प्यारो लाग्ने डाँडाकाँडा उकाली ओराली, खोला, नदीनाला, रूख बुटबुट्यानको साथ साथ पैदल यात्रा । हाम्रो पुर्ब तयारी र योजना अनुसार पर्यटकिय गाउँ धम्पुस र धम्पुस बाट पोथाना हुँदै प्रितम देउराली, फरेस्ट क्याम्प , अनि रेस्ट्क्याम्प जाने योजना अनुसारनै पोथाना लागियो । पोथाना पुग्दा बिहानको साढे ११ भै सकेको थियो । प्रकृतिलाई नियाल्दै पदयात्रीहरुको लामलस्कर संगै बहदै हाममी प्रितम देउराली पुगियो । बाटोमा देर्खिएको प्रकृति कति निश्चल, शान्त, सोभ्य, पबित्र, स्वतन्त्र, परिपक्क । । त्यहि प्रकृति हाम्रो साथी बन्दै थियो ।
जङ्गलको बाटो हुँदै तल देखिने गाउँ उत्तर तर्फका हिमालहरुको दृश्य हेर्दैहेर्दै प्रितम देउराली पुग्दा १२ बजेको रहेछ । पेटमा मुसा दौडिन थालिसकेका थिए । दायाँबायाँ होटल हेर्दैगर्दा त्यहाँ त केबल दुईवटा होटेल मात्रै रहेछन । तिनै होटेल बाहेक अर्को विकल्प थिएन । खानै पर्यो । खाना खाएर करिब १ बजे फरेस्ट क्याम्प तर्फ लागियो ।
मौसम अलि घुर्म्याइलो र हबाहुरी चलेको अनि अलि पानी परेको हुदा यात्रा अलि कठिन बन्दै थियो । जब पृतम देराली बाट जङ्गल को उकालो चढदै गर्दा झ्याउ झ्याउ गर्ने झ्याउ किरिको आबाजको झन्कार सङै सुइरे डाडा १३ः४५ बजे पुगियो । प्रकृति कति उर्जा्सिल रहेछ। आनन्दित महसुश गराउदछ बाटोमा पन्छिको चिरबिर आवाज दायाँ बायाँ हरियाली रूख डाडा माथी माथी बाटो ठुला ठुला रुख हरुको बिचमा ससाना बुटबुट्यानको सुन्दरता , अग्ला डाडाहरु संगआकाशको मिलन अनि धर्ति को चमत्कारीता देखेर कस्को मन रमाउदैन र । उकालो चडदै गर्दा पसिना,चिसो सिरेठो र बिर्बिरे पानीको कुस्तीले लथ्रकै बनाएको कपाडा र जिउलाई धकेल्दै धकेल्दै उकालो चढ्यौ। बल्ल तल्ल थकित शरीर लियर ५:०० बजे फरेस्ट क्याम्प पुगियो । भिजेको चिबे चराझै थचारियर बसिहालौ जस्तो । तर हाम्रो गन्तव्य रेस्ट क्याम्प सम्म पुग्नु पर्ने थियो अझै झण्डै १ घन्टा फेरि उकालो चड्नु पर्ने कुराले पिरोली रहेको थियोे जिनतिन उक्त उकालो लाई छिचोल्दै २६०० मिटर को उचाई मा रहेको रेस्ट क्याम्प पुग्दा झम्झम साझ पर्न लागेको थियोे ।केही समय आस्चर्य भयौ नजिकै देखिने माछापुच्छ्रे हिमाल अनि वरिपरि देखिने हरिया जङ्गल का डाडाहरु ले ।त्यही बेलुका बस्ने जोहो मिलाइ सकेका थियौ । अग्लो ठाउमा रहेको होटेल (रेस्ट क्याम्पमा एउटै मात्रै होटेल रहेछ)। क्या गजब लाग्ने ठाउ । केही फोटोका क्लिपहरु लियौ । साझ परिसकेको थियो खाना खाने बेला भैसकेको थियो ।खाना खाने क्रममा थुप्रै पदयात्री स्वदेसी अनि बिदेसी संग कुराकानी हुँदै गर्दा नेपाली ,युरोप अमेरिका लगायत एसियायी देसका नागरिक रहेछन। बेलुका चाडै नै खानपान को ब्यबस्था गरि थकित शरीर लाई घत्रक्क ओछान फ्याकियो । भोलिपल्ट बिहान ब्रेकफास्ट गरि बिहान करिब ८स्०० बजे हाइ क्याम्प तर्फ सोझ्यायौ ।
यात्राअगाडि बढ्दै जादा दायाँ पट्टि बाट मर्दी खोलाको पहाडी खोच बाट बहेको हावाको सुस्त बहाब सककगै जङ्गल को बिच बाट थुप्रै लाबालस्करमा रहेका बिदेसी तथा स्वदेसी पैदेल यात्रीले जनाउ दिइसकेका थिय कि मर्दी हिमाल कति पपुलर रहेछ । यिनै यात्री अनि भिरालो बाटो जङल को बिच बाट हिददा हामी कहाँ छौ जस्तो लाग्ने ।उकालो बाटो जङ्गल को बिचबाट हिडदै गर्दा बाटोमा भेटिएका स्वदेसी अनि बिदेसीसंग हासो ठट्टा गर्दै केही नेपाली गित हरुमा नाचदै नाच्दै अगाडि बढ्यौ ।
करिब ११ः३० बजेको हुदोहो बादल डाडा पुग्दा बादल डाडा बाट देखिने अन्नपूर्ण साउथ हिम चुली फिस्टेल मार्दी जस्ता हिमाल ले हामिलाइ मात्रै होइन सबैलाइ मन्त्रमुग्द नै बनायो सधै यतै बसौ जस्तो लाग्ने बादलडाडा धयध ।
यहि सौन्दर्यतासंगै केही समय बडो रमाइलो संग नाचगान गर्नपो पुगियछ । बादल डाडा बाट देखिने हिमाल शृङ्खला अनि घासे चौर उक्त चौरमा चर्दै गरेका भेडा बाख्रा को सुन्दर दृश्यले ले हरेक पैदल यात्री लाइ प्रफुल्ल बनायो । त्यहा हाम्रा थकान मेट्यौ । बादल डाडा बाट माथी जाँदै गर्दा दायाबाया देखिने उच्च पहाडि घाँसे चौरमा चरी रहेका भेडा बाख्रा संगै पदयात्रा हिडदाको अनुभव वा के गजब को । दायाँ पट्टि बाट बगेको मर्दी खोलाको पहाडी खोच बाट बहेको हावाको सुस्त बहाब सककगै जङ्गल को बिच बाट थुप्रै लाबा लस्करमा रहेका बिदसी तथा स्वदेसी पैदेल यात्री । कतै स्वर्ग को टुक्रा त होइन भन्ने लाग्छ । रहरमा देखीएका सपना जस्तै अनुभुतीको यात्रा हुन पुग्छ । जति हेरे पनि आनन्द प्राप्त हुने प्रकृतिको अनुपम दिव्यलाई धन्य छ । बाटोबाट देखिने लस्करै लाम लागेर झल्किएका हिमशृंखलाहरुले कसको मन नलोभ्याउला र ? यसरी नै रमाइलो गर्दै करिब २स्४० बजे हाइक्याप पुगियो । हाइक्याप मा थुप्रै होटेल रहेछन । हामिले पहिलेनै होटेल नमस्तेमा बस्ने गरि बुकिङ गरेका थियौ । त्यहा पुगेपछि नमस्तेका प्रोपाइट याम र क्षेत्री संगको भलाकुसारी ले धेरै कुरा को जानकारी भयो । बाहिर निस्कियौ हाइक्याम्प बाट देखिने अन्नपूर्ण साउथ हिउचुली गङाचुली फिस्टेल ,मर्दी हिमाल बाफ रे !
तेस्रो दिन हाम्रो गन्तव्य थियो मर्दी हिमाल बेसक्याप । हाइ क्याम्प बाट बेस्क्याप पुग्न डरलाग्दो र ठाडो उकाले बाटो करिब ४ घन्टा लाग्ने कुराले हामीलाई सताएको थियो ।हाइक्याम्प बाट मर्दी हिमाल बेसक्याम्प जाने योजना अनुसार नै । भोलिपल्ट बिहान करिब ३ बजे उठेर हिडनु पर्ने मौसममा ले साथ देला नदेला मन भित्र खुल्दुली चली रहिको थियो । यसै खुल्दुली बिच भोलि बिहान ३ बजे हिड्ने बाटो कस्तो होला अहिले उज्यालोमा गयर थोरै भयपनी हेरौ भनेर अलि माथी के पुगेका थियौ । एक जना चौरी याक पालन गरेका भोज बहादुर भेट हुन पुगे सोधपुछ गरियो ।हामिले भोलि पल्ट बिहान हाइक्याम्प जाने बाटो हेर्न आयका हौ भनेर वहाँ लाई भनेका मात्रै थियौ । हाम्रो कुरा सुनेर बाटो को अबस्थाको बारेमा बताए । वहाले आफ्नै चौरी गोठ हेर्न जान अनुरोध गर्नु भयो । वहाको अनुरोध लाई नकार्न सकियन । गयको त करिब एक घन्टा पो लाग्दो रहेछ । चौरी गोठमा पुग्दा चौरी का २०भन्दा धेरै बाच्छा बाच्छी रहेछन ।
वहाँको सङ्गघर्स सिल जीवन देखेर थप कुराकानी गर्न मन लाग्यो गोठ भित्रै बसेर आगो ताप्दै गफ गर्दै गर्दा वहाले दूध उमालि सक्नु भयको थियो । उक्त चौरि गाईको कठ्यैरीको चोप जस्तो खाटी दूध गिलास भरी दिनु भयो । चौरी को दूध अति कडा हुन्छ पचाउन गाह्रो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थो हाम्रो सरले । “जे होला देखा जायगा खुबै भयो भने पखालै लाग्ला“ भन्दै भन्दै मजासंग पाकेको दूध लाई भलाकुसारी गर्दै खाइयो।
भोलिपल्टको हाम्रो गन्तव्य मर्र्दि ्हिमाल बेसक्याम्प जसरी भयपनी पुग्नु थियो यो भर्खरै खायको दुधले पक्कै थप शक्ति दिने भो भन्ने आशा लागेको थियो । वहाको चौरी गोठ हेरेर फेरि हामी हाइक्याम्प फर्कियौ ।साझ पर्नै आटेको थियो होटेल पुग्दा।भोलि बिहान ३ बजे नै उठनु पर्छ भनेर बेलुकी खानाखाइ अरि सुतियो । हामी मध्ये का साथी लाई त दिउँसो खायको चौरीको दूध ले उकुस मुकुस “हगौ कि मुतौ जस्तै “गर्मी बनायछ । ट्याइलेट गयो दिसा लाग्दैन। लौ बर्बाद भय कि जस्तो लागेको थियो ।जसोतसो एक छिन निद्रा लागेछ। बिहानै ३ बजे उठियो ।त्यहा हाम्रो होटेल को वरि परि बस्ने मानिसको गाइगुइ र धुइरो लागि सकेको थियो । हामी पनि त्यही गाइगुइ संगै उठियो त्यही हुल संगै हाइक्याम्पतर्फ लाग्यौ ।आज दिन राम्रो होला जस्तो छ र मौसम ठिकै छ । यति माथि आइसकेपछि यसै फर्कनु नमज्जा हुन्छ भन्दै भन्दै भ्यु पोइन्ट अनि अपर भ्यु पोइन्ट अनि बेसक्याम्प सबैभन्दा उँचो स्थानमा पुगेर सूर्योदयसँगै सम्पूर्ण हिमाल हेर्न रहर लाई पूरा गर्नु थियो। हाइ क्याप बाट भ्यु पोइन्ट पुग्न झन्डै २ घन्टा सुर्योदय को लागि उपयुक्त ठाउँ ।अनि त्यहा बाट अपर भ्यु हुँदै मर्दी हिमाल बेस क्याम्प पुग्न झन्डै ४घन्टा लाग्दो रहेछ ।
मर्दिको आधारशिविर (४५००मिटर) सम्म पदयात्रा गरिने भएकाले मनमा अझै उत्सुकता उमंग ले हामिलाइ चाडैं पुग्न लालाहित बनायको थियो ।
पदयात्राको क्रममा सबैभन्दा असजिलो बाटो हाई क्याम्प बाट बेसक्याम्प पुग्नको लागि रहेछ। हुन त पदयात्रीहरुलाई विकल्प रहेछ, सजिलो बाटो रोज्दा अलि लामो पर्दो रहेछ। हामिले छोटो अनि असजिलो बाटो रोज्यौ ।डाँडाको थाप्लै थाप्लो हिँड्दा तल अन्नपूर्ण सेन्चुरी पदमार्गको छोम्रोङ, र माछापुछ्रे वेसक्याम्प देखिदा रहेछन।अनि भ्यू प्वाइन्ट पुगेपछी अन्नपूर्ण साउथ, हिमचुली, अन्नपूर्ण प्रथम, सिंगचुली, टेन्ट पिक, गंगापूर्ण, गन्धर्व चुली, माछापुच्छे्र र मर्दि हिमालको चुचुरो देखिदा रहेछन। हामी बिहान ६स्०० बजे भ्यु पोइन्ट त्यस पछि अपर भ्यु पोइन्ट हुँदै बेस क्याम्प पुग्दा झन्दै आठ बजिसकेको थियो । सायद लाग्छ हिजो खायको एक गिलास चौरी को दुधले गर्दा होला। बेस क्याम्प पुग्दा वरिपरि नाङ्गो डाडा हरु अलि तल पट्टि देखिने घासे मैदान दक्षिणी भेग मा देखिने हरियाली जङ्गल उत्तर तर्फ देखिले हिमशृङ्खला धयध ।।। अनि माछापुच्छ्रे को काखमा थच्क्क बसेको मर्दी हिमाल बाफरे अनि तिनै हिमाली शृङ्खला संगै जोडियको अलिअली सेतो बादल संगै निलो आकाशको मिलन अनि धर्ति को चमत्कारीता देखेर भन्न मन लाग्छ “ मिसन पूरा हुन्छ मर्दी हिमाल बेसक्याम्प जानुहोस पछुताउनु पर्दैन “ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबर्धन गरौ ।
अन्तमा समग्र यात्रा लाई हेर्दा
बाटो बाटोमा भेटिने होटल रेस्टुरेन्टले बस्न खान सहज बनाइ दियको छ ।प्रकृतिक हिसाब ले बडो सुन्दर छ मर्दि पदमार्ग। त्यसकै फेदि गन्तव्य स्थान हो । मर्दी बेस क्याम्प सम्म पुगिन्जेल बाटोमाभेटिने दृश्य हरुले पदयातृको उर्जा थपिदिन्छ । त्यहा रहेको प्राकृतिक सौर्न्दर्यता संगै नेपाली र विदेशी पदयात्री संगको भलाकुसारीले यात्रा छोटो भयको भान हुन्छ ।बाटोमा आफ्नो व्यावसाय गर्ने पर्यटन व्यवसायी हरु सहयोगी मृदुभासी र फ्रेन्डलि छन ।मर्दि हिमाल को पर्यटन इतिहास हेर्ने हो भने स्वीस नागरिक बेसेल ले सन् १९५६ मा पहिलो पदयात्रा गरेका रहेछन् । सन् १९८० देखि क्याम्पिङ ट्रेकिङ सुरु भयको रहेछ।
पहिले पहिले फरेष्ट क्याम्प लो क्याम्प, हाई क्याम्प भनिने ठाउँहरु भेडा र भैसी पाल्ने खर्क थिए भने अहिले मर्दी हिमाल को पहिचान पछि यस क्षेत्रको बिकास ले तीब्र गतिमा काचुली फेर्दै गयको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।पोखराको सामिप्यमा रहेको यो मर्दी बेसक्याम्प छोटो दुरिको यात्रा गर्ने यात्री को लागि यो निकै उत्तम देखिन्छ । बिस्तारै पदमार्गको खोजी र पदमार्गीको आबतजाबत संगै बिस्तार र बिकास भयको रहेछ । अहिले धेरैको रोजाइमा पर्दो रहेछ मर्दी हिमाल । पर्यटन प्रबर्द्धनको लागि अझै केही कुराहरुको सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । जस्तै बिजुलि, खानेपानी , पैदल मार्गको सुधार लगायत पैदल यात्री को लागि सहज हुने आबस्यक सूचना तथा सेवाहरु को सहज बिकासगर्न सकेमा अन्तरास्ट्रिय स्तरको पैदल मार्ग बन्न सक्ने देखिन्छ ।
लेखक प्रबासी मञ्च युकेका उपाध्यक्ष हुन ।